tranzit जाने पावर व्हीलचेयर - Karman Tranzit इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर जानुहोस्
घर / पसल / म्यानुअल व्हीलचेयर / मोटरसाइकल व्हीलचेयर
Tranzit गो - इलेक्ट्रिक
Tranzit-Go पावर व्हीलचेयर-Foldable र लामो दूरी
प्रतियोगिता बाट मूर्ख नहुनुहोस्। हाम्रो 20 एर्गोनोमिक कन्टूर सिटिंग मानक १″ ″ सीटहरु कि अन्य प्रस्ताव भन्दा व्यापक छ। एक भारी शुल्क मोडेल को रूप मा, यो लाइन मोडेल को एक प्रीमियम शीर्ष छ। यो हाम्रो दोस्रो पुस्ता TRANZIT जाओ हो र सबै नयाँ अपडेट र सुधार हामीले यो जेन अपडेट मा बनाएको याद छैन। हामी तपाइँलाई दुबै लामो दूरी को यात्रा बेहतर आराम संग मिल्छ। Foldable विकल्प तपाइँ सजीलै संग stow गर्न अनुमति दिन्छ पावर व्हीलचेयर तपाइँको गाडी मा वा उडान। Tranzit गो डिजाइन बजार मा उपलब्ध हल्का foldable पावर व्हीलचेयर को अभाव बाट प्रेरित थियो। यो foldability र सानो आकार यो सजीलै एक पारम्परिक स्कूटर बनाम एक विशेष बोक्ने अड़चन को आवश्यकता लाई हटाउन को लागी तपाइँको वाहन मा ढुवानी गर्न को लागी अनुमति दिन्छ। हवाई यात्रा सेटअप संगै २ मानक ब्याट्री यो एक कोशिश गरीएको र साँचो यात्रा साथी हुन अनुमति दिन्छ। यसलाई शाब्दिक कहीं पनी तपाइँ जानुहोस्। यो शैली संग एक साँचो EV व्यक्तिगत यातायात एकाइ हो! तपाइँको मनपर्ने पेय को चुस्की लिनुहोस् जब तपाइँ तपाइँको Tranzit Go मा जिप टाढा हुनुहुन्छ र यो न केवल शैली तर आराम संग गर्नुहोस्! यो एक हो कि साँच्चै शहर को वरिपरि तपाइँ शाब्दिक जबकि ध्यान दिईन्छ लिन सक्नुहुन्छ। अग्रणी उद्योग मापदण्ड र OEM घटक संग समर्थित एक कम्पनी बाट मात्र किन्नुहोस्। जीवन को लागी गतिशीलता संग Karman किन्नुहोस्!
नीति र प्रक्रियाहरु को बारे मा अधिक जानकारी को लागी प्रत्येक उत्पादन संग जोडिएको वारेन्टी कार्ड को सन्दर्भ गर्नुहोस्। वारंटी मात्र मूल खरीद र उत्पादन को वितरण को लागी विस्तार गरीएको छ। वारेन्टी हस्तान्तरण योग्य छैन। भागहरु वा सामाग्री जो सामान्य लुगा र आँसु को अधीनमा छन् जो प्रतिस्थापन / मर्मत गर्नु पर्छ मालिक को जिम्मेवारी हो। प्रयोगकर्ता लापरवाही, आकस्मिक क्षति जानबूझेर वा फ्याक्ट्री वारेन्टी अन्तर्गत कभर गरीएको छैन कारण क्षतिग्रस्त। आर्म प्याड र असबाब ग्यारेन्टी द्वारा कभर छैन। यो सिफारिश गरिएको छ कि वारेन्टी अन्तर्गत कुनै दावी अधिकृत डीलर सेवा को लागी जसको माध्यम बाट यो बाट किनेको थियो फिर्ता गर्न को लागी।
कुनै पनि चाँदी काले
15 माइल प्रति चार्जबाट ड्राइभिङ विस्तार गर्दछ, प्रति चार्ज 30 माइल सम्म।
कुनै पनि माध्यमिक ब्याट्री (दोगुना चार्ज) (+$516.00)
Tranzit Go - इलेक्ट्रिक मात्रा
SKU: PW-F500 विभाग: बेरिएट्रिक व्हीलचेयर, मोटरसाइकल व्हीलचेयर, पावर व्हीलचेयर, रोलेटर, Rollators र वाकरहरु टैग: फोल्डेबल पावर व्हीलचेयर, तह इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर, हल्का व्हीलचेयर, यात्रा शक्ति व्हीलचेयर, व्हीलचेयर, व्हीलचेयर
यो ट्रान्जिट गो एक क्रान्तिकारी foldable छ पावर व्हीलचेयर विश्वव्यापी रूपमा प्रयोगकर्ताहरुको जीवन सुधार गर्न को लागी डिजाइन गरीएको छ। सबैभन्दा हल्का वजन तह मध्ये एक पावर व्हीलचेयरहरू, मात्र 56 पाउण्ड मा, यो व्हीलचेयर मन मा यातायात संग डिजाइन गरीएको छ। एक कम्प्याक्ट १४ "मा तह गर्न मात्र केहि सेकेन्ड लिँदै, यो व्हीलचेयर स्वतन्त्रता लाई बढावा दिन्छ, गतिशीलता र आराम। दुबै बाहिरी र भित्री नेभिगेसन को लागी बनाईएको हो, उत्कृष्ट मोड्ने त्रिज्या तंग ठाउँहरु मा चिन्ता अतीत को चिन्ता बनाउँछ! यो कुर्सी तपाईलाई आउँछ पुरा तरिकाले जम्मा गरीएको छ र १२.५ "ठोस फ्लैट मुक्त टायर संग, एक फ्लैट टायर को संभावना मा झगडा अब एक चिन्ता छैन!
तौल मात्र ५ l पाउण्ड (ब्याट्री बिना)
तह र हल्का फ्रेम
प्याडेड सीट र प्याडेड ब्याकरेस्ट
फुटप्लेट माथि फ्लिप गर्नुहोस्
सीट मुनि भण्डारण थैली
8 ″ x 1.5 ″ ठोस Polyurethane फ्रन्ट कास्टर
१२.५ ″ x २ ″ ठोस Polyurethane रियर कास्टर
फोल्ड आयाम 25 x 14 x 32 इन्च
लिथियम आयन ब्याट्री (2pcs समावेश)
हटाउन सकिने जोइस्टिक र कप होल्डर (बायाँ वा दायाँ छेउ माउन्ट)
ब्याट्री बिना वजन मात्र 56 एलबीएस (62 एलबीएस डब्ल्यू/दुबै ब्याट्री)
त्रिज्या 35 ning घुमाउँदै
अधिकतम बाधा उचाई १.२० इन्च।
अधिकतम ढाल ढलान 8 डिग्री
अधिकतम गति:4मील प्रति घंटा
ड्राइभिंग दायरा: १५ माइल
सिफारिश गरियो अधिकतम वजन क्षमता: 330-400 पाउण्ड
वजन क्षमता 330-400 lbs
अगाडि कास्टर्स 8 "एक्स 1.5"
रियर व्हील 12.5 "एक्स 2"
ब्याट्रि 24V/6AH ली-आयन (दोस्रो ब्याट्री वैकल्पिक)
अधिकतम गति4mph
अवधि चार्ज 6-8 घण्टा
ड्राइभि Ran दायरा १५-३० माइल (अतिरिक्त ब्याट्री उपलब्ध)
त्रिज्या मोड गर्दै 35 "
समग्र लंबाई 37 इन्च
समग्र चौडाइ 25 इन्च
समग्र ऊँचाई 41 इन्च
समग्र चौडाइ तह 14 इन्च
सिट चौड़ाई 20 इन्च
सिट गहराई 16 इन्च
पछाडि उचाई 14 इन्च
भुइँ बाट सीट उचाई 20 इन्च
ट्रान्जिट-जानुहोस् पावर व्हीलचेयर UPC#
PW-F500- एसआई 643517943202
PW-F500- बीएल 643517943226
29 × 17 × 34 मा
आर 4608-15 पाउण्ड
आर 4700-24 पाउण्ड
आर ३ 3600००-३ पा Whe्ग्रा